Haweenay gacaliyaheedii oo meyd ah 11 saac hareer fadhidey diyaarad gudaheed – SBC
Haweenay gacaliyaheedii oo meyd ah 11 saac hareer fadhidey diyaarad gudaheed
Dhacdo la yaab & argagax leh ayaa todobaadkan ka dhacdey gudaha diyaarad hawada mareysay oo isaga kala gooshaysay wadamada Singabore & New Zealand, ka dib markii haweenay ay mudo 9 saacadood ah dhinac fadhidey gacaliyaheedii oo meyd ah kaasi oo diyaarada ku dhex dhintey.
Vanessa Preechakul oo gabar u dhalatey wadanka Singapore ayaa qaracan & murugo ku dhameystey safar qiiro & dareen lahaa oo ay la wadaagaysey gacaliyaheeda iyadoo xili ay ku jireen farxad & rayn rayn uu isku rogay murugo & qaylo dhaan.
Dhacadu waxay timid ka dib markii diyaaradu hawada ku jirtey mudo 90 daqiiqo ah ayaa Vanessa Preechakul, saaxiibkeed Robert Rippingale oo 31 sano jir ahaa iyo rakaabkii kale ee diyaarada waxaa loo qaybiyey raashinkii loogu tala galay maadama safarku uu ahaa mid aad u dheera oo qaadanaya 11 saacadood.
Robert Rippingale ayaa wuxuu dhinac fadhiyey saaxiibtiis Vanessa waxaana lagu jiray gacmo is qabqabsi iyo mar mar oo la is shuminayey iyadoo la daawanayey filimaan, hase yeeshee hal mar ayay ka warheshay Vanessa Robert oo gariiraya isla markaana dhuunta haysta indhihiisu gadoomeen, faruuryahana cunaya.
Robert ayaa xiligaasi wuxuu cunayey cunto isagoo sidoo kala daawanayey filim, waxaana saaxiibtiis Vanessa Preechakul ay u qaadatey in uu ciyaar ciyaar ku jiro iyadoo la qosleysa balse waxay xaaladu isbashay ka dib markii ay aragtey oo dhuunta haysta indhihiina ay wada gadoomeen.
“Daqiiqad ka hor waynu isla fadhinay, gacmaha is haysan, daqiiqadii xigteyna dhuunta ayuu haystey oo ceego ayaa ku dhegtey” ayay tiri Vanessa oo 27 sano jir ah.
Robert oo u dhashay New Zealand wuxuu u socdey in uu kala qayb galo hooyadiis oo u dabaaldegaysay sanad guuradeedii 50-aad waxaana uu wadey saaxiibtiis si uu soo baro qoyskiisa iyo wadankiisa gaar ahaan magaalada uu ka soo jeedo ee Auckland.
Robert ka hor intii aanu soo raacin diyaaradii uu ku dhexgeeriyoodey
Vanessa ayaa markii dhacdadu ay ku xumaatey oo ay dareentey in xaalad qatar ah uu ku jiro Robert waxay ku dhufatey qaylo waxaana ay u yeertey shaqaalaah diyaarada, waxaana durbadiiba u yimid Dhakhtar & laba kalkaaliye, waxaana loo fidiyey gargaar aan lagu guuleysan.
“Dhakhtarka ayaa ii yimid waxaana uu ii sheegay in uu ka xunyahay oo ay ka xun yihiin inaanay awoodin inay badbaadiyaan maadama uu dhintey” ayey tiri Vanessa oo ka sheekeynaysay sida wax u dhaceen.
Vanessa Preechakul ayaa waxay hareer fadhidey gacaliyaheedii oo geeriyoodey oo shaqaalaha diyaaradu dhigeen goobta ay ku nastaan waxaana ay saareen maro iyadoo diyaaradu ay hawada ku jirtey 11 saacadood.
Andrew McGinnes oo ah Afhayeen u hadley shirkada diyaaradaha Jetstar oo ah shirkada iska leh diyaarada dhacdadan ka dhacdey ayaa sheegay in ay u diyaraan tacsi qoyska uu ka geeriyoodey Robert, isagoo sidoo kale u mahadceliyey dhakhtarka & kalkaaliyeyaasha isku dayey inay u gurmadaan ninkaasi.